true investigations /zu-ZA/tools-for-life/investigations/steps/investigation-and-its-use.html read 6 9 /tools-for-life-furl/imagecache/cropfit@w=3000/data/scientology-courses/files/certs/investigations_zu_ZA.jpg Uphenyo
Umuntu usebenzisa ulwazi olungenhla nekhono ukuthola isizathu sangempela sesimo esihle noma isimo esibi. Lokhu kubizwa ngokuthi “Why.”
I-Why itholakala ukuthi ukuphuma kwesisekelo okuzoholela ekubuyiselweni kwezibalo. I-outness yinto eyenziwe ngokungalungile noma edukile ngokuphelele.
Izibalo ukukalwa kwenombolo noma inani lezinto kuqhathaniswa nenombolo yangaphambili noma inani lezinto ezifanayo. Izibalo zikala i-volume noma i-quality yokukhiqiza komsebenzi othile. Noma yimuphi umsebenzi ungalinganiswa ngesibalo esikhombisa ukukhiqizwa kwalowo msebenzi.
Isibonelo, inani lokuthengisa esitolo sezicathulo lehlile. Omunye uthola isizathu noma i-Why yalokhu kwehla kanje ekuthengisweni kwezicathulo. Balungisa lokho abakutholile. Emasontweni amabili kamuva isibalo sokuthengiswa kwezicathulo (isibalo sezicathulo ezithengisiwe) esitolo sithuthukisiwe futhi sesilulame ngokuphelele ekwehleni. Lokhu kukhombisa ukuthi isizathu noma Why senani lezicathulo ezathengiswa ezitholakele sasilungile.
U-Why ongalungile yi-outness ekhonjwa ngendlela engafanele okuthi lapho isetshenziswa kungaholeli ekululameni.
Esibonelweni sokuthengiswa kwezicathulo ngenhla, ake sithi ngemuva kwamasonto ambalwa ukuthola “i-Why” kanye nokuzama “ukulungisa” yona, isibalo senombolo yokuthengiswa kwezicathulo kwehle ngisho nangokwengeziwe. “I-Why” lokho okutholakele akuholelanga ekubuyiselweni kwezibalo zokuthengisa izicathulo. Bekungu Why ongalungile.
Ukuchazwa nje kwegama elithi “Why” inikezwe njengesixa sokuthi Why lokho kungakwazi ukwenza noma yikuphi ukululama.
Futhi, sisebenzisa isibonelo sesitolo sezicathulo: i-Why yokuncipha kokuthengiswa kwezicathulo kuyanikezwa: “Izibalo zehle ngenxa yesimo sezulu ngalelo sonto.” Ngakho ke? Manje ke siyayicisha imvula? Lencazelo ayinamphumela kunoma yisiphi isibalo esiphakanyisiwe.
Enye incazelo nje ukuthi: “Abasebenzi bakhungatheka kulelo sonto” okusho ukuthi bathintwe okuthile ngokuqinile. Ngakho ke kunganikezwa umyalo othi “Musa ukusebenzisa abasebenzi ngokweqile” njengesisombululo “esingenzeka” ngumphathi. KODWA IZIBALO NGEKE ZILULAME. Ngakho-ke incazelo enikeziwe ayikwazanga ukubizwa ngokuthi u-Why. Akuholelanga ekululameni kwezibalo.
I-real Why, elungile, lapho itholakala futhi ilungiswa iholela ngqo kwizibalo ezithuthukisiwe.
U-Why ongalungile ulungiswa, uzothuthukisa futhi izibalo.
Ukuchaza nje akusho lutho nhlobo futhi izinto ziyaqhubeka nokwenza kabi.
Nasi esinye isibonelo: Izibalo zendawo zaseziphansi. Uphenyo luveze ukuthi bekukhona ukugula emasontweni amabili adlule. Kuvele lo mbiko: “Izibalo bezingaphansi ngoba abantu bebegula.” Lokhu bekuyincazelo nje, enikeza “isizathu,” kepha azange ixazulule lutho. Yini engenziwa manje? Mhlawumbe lencazelo yamukelwa njengo-Why olungile. Kube sekukhishwa umyalo wokuthi, “Bonke abantu endaweni kufanele bathole izivivinyo zokwelashwa kanti nabasebenzi abangenampilo ngeke bavunyelwe. Abasebenzi abangenampilo bazoxoshwa.” Ngoba lokhu kungukulungiswa ku-Why ongalungile izibalo zomsebenzi olinganisa ukukhiqizwa kwawo kwehle kakhulu. Ngakho ke akusikho lokho. Ukubheka ngokuqhubekayo i-real Why itholakale: Umphathi endaweni unikeza imiyalo kubantu abangalungile okuyothi uma ilandelwa bese ilimaza ukukhiqiza kwabo bese izibalo zabo zokukhiqiza ziyehle.
Ukulungisa lokhu, indawo ihlelekile, umqashi uqeqeshwa ngokushesha ukuze azi ukuthi kwenzekani futhi akahlali ekhipha imiyalo engalungile. Njengomphumela, ukukhiqizwa kwendawo kuyathuthuka futhi izibalo ezilinganisa ukukhiqizwa kwendawo ziyalulama futhi zikhuphuke nangaphezulu. U-Why ofanele uholele ekululameni kwezibalo.
Nasi esinye isibonelo: Izibalo ziphansi esikoleni. Isibalo sabafundi abaphothula izifundo zabo ngesikhathi esilindelekile sehle kakhulu. Uphenyo lwenziwa olunikeza incazelo ethi: “Bonke abafundi bebematasatasa ngezemidlalo.” Ngakho ke abaphathi bezikole bathi “Azikho ezemidlalo zabafundi!” Manje isibalo sokuqedwa kwabafundi sehle futhi. Uphenyo olusha luqhamuka no-Why ongalungile: “Abafundi bafundiswa okungafanele.” Abaphathi besikole baxosha i-dean, isikhulu esiphethe izitshudeni nothisha. Manje isibalo sehla kakhulu ngamawala.
Ekugcineni, kwenziwa olunye uphenyo olunekhono ngokwengeziwe. Kuyavela ukuthi bekunabafundi abangu-140 ne-dean kuphela kanye nothisha oyedwa! Futhi i-dean lalineminye imisebenzi! Ngakho ke i-dean ibuyiselwa emsebenzini walo futhi kuqashwe abanye othisha ababili, okwenza othisha babe bathathu. Izibalo esikoleni ziyakhuphuka kakhulu ngoba u-Why olungile utholakele.
Ukuphathwa nezinhlekelele zenhlangano kanye nempumelelo konke kuchazwa yilezi zinhlobo ezintathu ze-Why. Ngokungacabangi—i-oda lamanga noma i-datum engeniswe esimweni esithile—mhlawumbe u-Why ongalungile ugcinwe umthetho. Futhi uma kugcinwa ngaleyondlela, umsebenzi osebenza ngaphansi kwalomyalo wamanga noma i-datum izoba nenkinga enkulu futhi izibalo ezilinganisa ukukhiqizwa kwawo zizohlala ziphansi kakhulu.
Ngakho ke uma ufuna ukusisingatha kahle isimo esibi, kufanele uqonde ukucabanga ukuze uthole u-Why olungile futhi kufanele uqaphele futhi ulungise u-Why ongalungile.
Ebhange lomhlaba jikelele, lapho ukwehla kwamanani kwenzeka njalo, imithethonqubo ehlukahlukene yezimali noma imithetho mhlawumbe nje yochungechunge olude lo-Whys ongalungile. Inani lemali nokusebenziseka kwayo kwesinye isakhamuzi kungonakala kuze kufike lapho kungakhiwa khona i-philosophy yonke. Lokhu kwenzeka edolobheni lasendulo lase-Sparta. U-Lycurgus, umenzi womthetho wamaGrikhi, wasungula imali eyenziwe ngensimbi okungekho muntu owayengayiphakamisa, ngakho ayizange isetshenziswe. Wayezama ukuqeda “ububi bemali” e-Sparta. Lokho kwamisa ukusetshenziswa kwemali ngokuphelele futhi endaweni yemali bekungekho lutho kodwa umbhedo.
Izinkinga zenhlangano zanda kakhulu izincazelo nje (okuholela kungathuthukisi) noma i-Whys engalungile (ebangela ukwehliswa okwengeziwe kwezibalo). Ukuthuthuka oku-organizational kuvela ekutholeni i-real Why futhi uyilungise.
Ukuhlolwa i-real Why “Uma kulungiswa, izibalo ezilinganisa ukwenziwa kwendawo ziyalulama?” Uma benza, khona-ke kungani uLwazi wayelungile. Futhi noma yimuphi omunye umyalo wokulungisa onikezwe kepha osuselwe ku-Why ongalungile kufanele ukhanselwe ngokushesha.